संसद्‌मा चलचित्र क्षेत्रको वकालत गर्दै जया बच्चन
कंगना भन्छिन्- हाम्रो ठाउँमा तपाईंका सन्तान भएको भए ?
२०७७ भदौ ३० मंगलबार १४:५१:००
एजेन्सी । समाजवादी पार्टीकी सांसद जया बच्चनले चलचित्र उद्योगको पक्षमा आवाज उठाएकी छन् । भाजपा सांसद र अभिनेता रवि किशनले लोकसभामा सम्पूर्ण चलचित्र उद्योग लागुपदार्थको दुर्व्यवसनमा फसेको भनेपछि जयाले फिल्म उद्योगका पक्षमा धारणा राखेकी हुन् ।
मनसुन सत्रको दोस्रो संसदमा जया बच्चनले भनेकी छिन्, “मनोरञ्जन उद्योगका व्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालका कारण तनावमा परेका छन् । जसले यो क्षेत्रबाटै नाम कमाए, उनीहरुले नै यसलाई नालीको संज्ञा दिएका छन् । म यसमा पूर्ण रुपमा असहमत छु । मलाई आशा छ कि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यस्तो भाषा प्रयोग नगर्न भन्‍ने छ ।”
जयाले अगाडि थपेका छन्, “केही व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण उद्योगलाई नै दोष दिन मिल्दैन । हिजो लोकसभामा चलचित्र उद्योगकै एक व्यक्तिले चलचित्र क्षेत्रविरुद्ध बोलेकामा मलाई लज्जाबोध भएको छ । जुन थालमा खान्छन्, त्यही थालमा आ.. गर्छन् ।”
साथै उनले भारतमा चलचित्र क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा पाँच लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा अझै धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको पनि उल्लेख गरिन् । यस्तो विषम् परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालको यस्तो गलत खबर र सरकारको असहयोगको सिकार मनोरञ्जन क्षेत्र भएको पनि बताए ।
जयाको यो भनाइ अभिनेत्री कंगना रनौटको सन्दर्भमा आधारित रहेको अनुमान गरिएको छ । उनले चलचित्र क्षेत्रका ९९ प्रतिशत कलाकार ड्रग्स सेवन गर्ने र चलचित्र उद्योगलाई नालीको संज्ञा दिएकी थिइन् ।
जया बच्चनको यो भनाइपछि अभिनेत्री कंगना रनौटले तुरुन्तै जवाफ फर्काएकी छिन् । कंगना ट्विटमार्फत लेखेकी छिन्, “जयाजी के तपाईं मेरो ठाउँमा आफ्नी छोरी श्‍वेता भएको भए, उसलाई पनि पिट्ने अनि किशोरावस्थामै ड्रग्स दिने र मोलेस्ट गरिएको भए पनि यस्तै भन्‍नुहुन्थ्यो ? के तपाईं तब पनि यही भन्नु हुन्थ्यो यदि अभिषेक लगातार बुलिङ र ह्‍यारेसमेन्टको सिकार भएर एकदिन फाँसीमा झुन्‍डिएको भए ? थोरै सहानुभुति हामीप्रति पनि देखाउनुहोस् ।”